Ny torolàlana haingana amin'ny famoronana sarety fiantsenana fitsipika ao amin'ny Adobe Commerce (Magento) | Martech Zone
Ny torolàlana haingana amin'ny famoronana sarety fiantsenana fitsipika amin'ny Adobe Commerce (Magento)
Talata, Febroary 22, 2022 Talata, Febroary 22, 2022 Alex Khvoynitskaya
Ny famoronana traikefa fiantsenana tsy manam-paharoa no iraka voalohany amin'ny tompona orinasa e-varotra. Amin'ny fikatsahana ny fikorianan'ny mpanjifa tsy tapaka, ny mpivarotra dia manolotra tombontsoa miantsena isan-karazany, toy ny fihenam-bidy sy fampiroboroboana, mba hahatonga ny fividianana ho mahafa-po kokoa. Ny iray amin'ireo fomba azo atao hanatrarana izany dia ny famoronana fitsipiky ny sarety fiantsenana.
Nanangona ny torolalana amin'ny famoronana fiantsenana izahay fitsipika sarety in Adobe Commerce (fantatra amin'ny anarana hoe Magento taloha) mba hanampy anao hanao ny rafitra fihenam-bidy miasa tsy misy olana.
Inona no fitsipiky ny sarety fiantsenana?
Ny fitsipiky ny vidin'ny sarety fiantsenana dia ny fitsipiky ny admin momba ny fihenam-bidy. Azo ampiasaina izy ireo aorian'ny fampidirana code coupon/promo. Ny mpitsidika tranokala ecommerce dia hahita ny Ampiharo Coupon bokotra aorian'ny fampidirana vokatra amin'ny sarety fiantsenana sy ny sandan'ny fihenam-bidy eo ambanin'ny vidin'ny sobika.
Mora ny mamorona na manova ny fitsipiky ny vidin'ny sarety miaraka amin'i Magento, raha toa ka fantatrao hoe aiza no haleha voalohany.
Aorian'ny fidirana ao amin'ny dashboard admin anao, tadiavo ny Marketing bara ao amin'ny menu mitsangana.
Eo amin'ny zoro ambony havia, ho hitanao ny Promotions unit, mandrakotra ny katalaogy sy ny fitsipiky ny vidin'ny sarety. Mandehana amin'ny farany.
Ampio fitsipika sarety vaovao
Tsindrio ny Ampio fitsipika vaovao bokotra ary miomàna hameno ny fampahalalana fihenam-bidy fototra amin'ny sehatra roa:
Tantano ny kaody tapakila.
Famenoana ny fampahalalana momba ny fitsipika
Eto ianao dia hameno karazana tsipika maromaro.
Atombohy amin'ny Anaran-dalàna ary asio famaritana fohy momba izany. ny Description Ny saha dia ho hita ao amin'ny pejin'ny Admin mba tsy hanararaotana ny mpanjifa amin'ny antsipiriany be loatra ary tehirizo ho anao izany.
Alefaso ny fitsipiky ny vidin'ny sarety amin'ny fipihana ny bokotra etsy ambany.
Ao amin'ny fizarana tranokala, ampidiro ny tranokala izay hampihetsehana ny fitsipika vaovao.
Dia mandeha ny fifantenana ny Vondrona mpanjifa, mendrika ny fihenam-bidy. Ataovy ao an-tsaina fa azonao atao mora foana ny mampiditra vondrona mpanjifa vaovao raha tsy hitanao ny safidy mety amin'ny menio midina.
Famenoana ny fizarana tapakila
Rehefa mamorona fitsipika sarety fiantsenana ao Magento ianao dia afaka mandeha amin'ny Tsy misy tapakila safidy na mifidy a tapakila manokana faritra.
Tsy misy tapakila
Fenoy ny Fampiasana isaky ny mpanjifa saha, mamaritra hoe impiry ny mpividy iray ihany no afaka mampihatra ny fitsipika.
Safidio ny daty voalohany sy lany daty ho an'ny fitsipika mba hamerana ny vanim-potoana misy ny mari-pamantarana ambany kokoa
Ampidiro ny kaody tapakila.
Ampidiro ny tarehimarika ho an'ny Mampiasa isaky ny tapakila sy / na ny Fampiasana isaky ny mpanjifa mba hahazoana antoka fa tsy ho tafahoatra ny fitsipika.
Ny teboka iray hafa tokony hotandremana dia ny safidy famokarana coupon auto, izay ahafahana mamorona kaody tapakila isan-karazany aorian'ny famenoana fizarana fanampiny amin'ny Tantano ny kaody tapakila voalaza etsy ambany.
Fametrahana ny fepetran'ny fitsipika
Amin'ity fizarana manaraka ity dia tokony hametraka ny fepetra fototra hampiharana ny fitsipika ianao. Raha te hametraka fepetra manokana amin'ny sarety fiantsenana ianao dia azonao atao ny manova ny Raha marina ireo fepetra rehetra ireo fehezanteny amin'ny alalan'ny fisafidianana safidy hafa noho ny rehetra sy / na ny marina.
Tsindrio ny Mifidiana fepetra manampy kiheba hahitana ny menio fanambaràna midina. Raha toa ka tsy ampy ny fanambarana fepetra tokana dia aza misalasala manampy betsaka araka izay ilainao. Raha tokony hampiharina amin'ny vokatra rehetra ny fitsipika, tsidiho fotsiny ny dingana.
Famaritana ny Hetsika Fitsipika Fiantsenana
Amin'ny hetsika, ny fitsipiky ny sarety fiantsenana ao Magento dia midika ny karazana kajy fihenam-bidy. Ohatra, azonao atao ny misafidy eo amin'ny isan-jaton'ny fihenam-bidy amin'ny vokatra, ny fihenam-bidy voatondro, ny fihenam-bidy voatondro ho an'ny sarety manontolo, na ny variana Mividiana X mahazo Y.
Safidio ny safidy mety amin'ny Ampiharo vakizoro midina ary ampidiro ny habetsaky ny fihenam-bidy miaraka amin'ny isan'ny vokatra tokony hataon'ny mpividy ao anaty sarety mba hampiasana ny fitsipiky ny vidin'ny sarety.
Ny switch manaraka dia afaka manampy fihenam-bidy na amin'ny subtotal na amin'ny vidin'ny fandefasana.
Misy saha roa sisa tavela.
The Ario ny fitsipika manaraka Midika izany fa ny fitsipika hafa misy fihenam-bidy kely kokoa dia hampiharina na tsy hampiharina amin'ny saretin'ny mpividy.
Farany, azonao atao ny mameno ny Conditions amin'ny alàlan'ny famaritana ny vokatra manokana azo ampiharina amin'ny fihenam-bidy na avelao hisokatra ho an'ny katalaogy manontolo.
Fitsipika momba ny vidin'ny carte miantsena
Omeo ny Label fizarana raha mitantana fivarotana amin'ny fiteny maro ianao.
The Label Ny fizarana dia manan-danja ho an'ireo izay mitantana fivarotana e-varotra amin'ny fiteny maro satria mamela ny fanehoana ny lahatsoratra amin'ny fiteny samihafa. Raha miteny tokana ny fivarotanao na tsy te-hisahirana amin'ny fampidirana lahatsoratra etikety isan-karazany ho an'ny fijery tsirairay, dia tokony hisafidy ny hampiseho marika mahazatra ianao.
Fa ny fampiasana fiteny tokana dia tena con, mametra ny fahafahan'ny mpanjifa ary mampihena ny haavon'ny traikefany amin'ny fivarotana an-tserasera. Ka raha mbola tsy mahay fiteny ny e-varotrao dia makà fotoana hanaovana fanitsiana. Ary avy eo mamorona ny mari-pamantarana fitsipika ho fanondroana fandikan-teny.
Momba ny fitantanana ny kaody tapakila
Raha manapa-kevitra ny hamela ny famokarana mandeha ho azy kaody tapakila ianao, dia tsy maintsy manampy antsipirian'ny tapakila manokana kokoa amin'ity fizarana ity. Ampidiro ao amin'ny kiheba mifanaraka amin'izany ny isan'ny tapakila, ny halavany, ny endrika, ny prefixes/suffixes, ary ny tsipika. Save fitsipika bokotra.
Arahabaina, vitanao ny asa.
SOSO-KEVITRA: Raha vao mamorona fitsipika sarety iray ianao, dia mety hamorona hafa vitsivitsy mba hahatonga ny fihenam-bidy ho tena manokana kokoa. Mba hahafahanao mivezivezy amin'izy ireo dia azonao atao ny manivana ny fitsipika amin'ny alàlan'ny tsanganana, manitsy azy ireo, na mijery fotsiny ny fampahalalana momba ny fitsipika.
Ny fitsipiky ny sarety fiantsenana dia iray amin'ny Adobe Commerce Magento 2 endri-javatra izany dia hanampy anao hamorona tombontsoa mora ho an'ny mpanjifanao nefa tsy manoratra fehezan-dalàna. Amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana voalaza etsy ambony dia ho azonao atao ny manamboatra ny fivarotanao e-varotra ho mendrika kokoa amin'ny fangatahan'ny mpanjifa tsy mitsaha-mitombo, misarika mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny fanaparitahana kaody tapakila eo amin'ireo mpikatroka niche ary manatsara ny paikadinao ara-barotra ankapobeny.
Tags: adobe commerceadobe commerce cloudtapakila adobe commercehetsika fitsipika momba ny tapakila commerce adobefitsipika tapakila adobe commercehetsika fitsipika momba ny vidin'ny adobe commerce shopping cartFitsipika momba ny vidin'ny adobe commerce shopping cartmampihatra tapakilafitsipiky ny vidin'ny saretyahoana nofitsipiky ny sarety fiantsenana magentamagentoMagento 2 endri-javatracoupon magentohetsika fitsipika coupon magentofepetra momba ny coupon magentofitsipika coupon magentomitantana adobe commerce coupon coldesfitsipiky ny sarety
Val Kelmuts no lehiben'ny mpanatanteraka sy mpiara-manorina ao amin'ny Staylime, orinasa famolavolana sy fampandrosoana e-varotra manana foibe any Redwood City, Kalifornia. Manana traikefa 10 taona amin'ny fampivoarana rindrambaiko manokana, fitantanana varotra ary fampandrosoana orinasa izy. Val dia manam-pahaizana manokana momba ny varotra Adobe Commerce, manam-pahaizana voamarina momba ny orinasa Shopify, ary mpikambana PMI.